Inkanyezi ye-chess yaseGeorgia imangalela iNetflix ngokumbiza ngeRussia
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Films » Inkanyezi ye-chess yaseGeorgia imangalela iNetflix ngokumbiza ngeRussia
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ubugebengu • Amasiko • Films • Izindaba ze-Georgia Breaking • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
INetflix yaqamba amanga ngobulukhuni futhi ngamabomu ngokufeziwe nguGaprindashvili ngenhloso eshibhile nengathembi 'yokukhulisa idrama' ngokwenza kubonakale sengathi iqhawe layo eliqanjiwe likwazile ukwenza okungekho omunye wesifazane, kufaka phakathi uGaprindashvili, owayekwenzile.
Umpetha we-chess waseGeorgia ufaka icala lokungcolisa iNetflix ngokumveza ngokungeyikho ochungechungeni lwabo oludumile.
AbakwaNetflix basolwa ngokuba nobulili obedlulele futhi bayalulaza, futhi ngokusobala bangamanga ochungechungeni lwabo lwe-TV.
UNona Gaprindashvili ufake isimangalo sakhe ngeNetflix eNkantolo yesiFunda eLos Angeles.
Isilomo se-chess saseGeorgia uNona Gaprindashvili ufake icala elingama- $ 5-million lokungcolisa iNetflix ngokuba `` ocansini ngokweqile '' nokumbonisa njengeRussia ochungechungeni lwengoma ethi 'The Queen's Gambit' ka-2021.
UNona Gaprindashvili, owesifazane wokuqala ukuthola isikhundla sokuba ngumphathi we-chess wamazwe omhlaba kanye nompetha wesihlanu we-chess womhlaba wabesifazane, ufake isimangalo ngokumelene neNetflix ngokubhekisele kuye embukisweni ovelele, oqukethe umlingiswa oqanjiwe oqhubeka nokushaya abadlali abaphambili baseRussia eMoscow phakathi nawo-1960.
“Kwesinye seziqephu ezisukela ngonyaka ka-1968, umhlaziyi uthi umdlali we-chess uNona Gaprindashvili akakaze abhekane nabesilisa. Kodwa lokhu akulungile, ”kusho ummeli uMaya Mtsariashvili, umlingani weBLB, inkampani yabameli baseGeorgia emele lo mdlali, kusho namuhla.
Ummeli wengeze nokuthi umsebenzi wabo ecaleni lamacala uqalile ngemuva nje kokutholakala Netflix Ukukhishwa kochungechunge lwe-TV.
UGaprindashvili, u-80 uthathe okuhlukile engxenyeni yokugcina yochungechunge echaza "okuwukuphela kwento engajwayelekile ngaye" ubulili bakhe.
“Futhi noma lokho akuhlukile ku- Russia, ”Kuqhubeka ingxenye yesiqephu. "Kukhona uNona Gaprindashvili, kodwa ungumpetha womhlaba wesifazane futhi akakaze abhekane nabesilisa."
Ecaleni lakhe lokuhlambalaza elifakwe eNkantolo Yesifunda Sombuso eLos Angeles, uGaprindashvili kuthiwa uchaze lokho “njengamanga ngokusobala, kanye nokuba ngumuntu ocansini ngokweqile nokwedelela,” futhi wathi ngo-1968, wayebhekane nokungenani i-chess yesilisa okungenani engama-59 abadlali.
Isikhalazo siyaqhubeka: “Netflix ngokuqamba amanga nangamabomu ngokuphumelela kukaGaprindashvili ngenhloso eshibhile nengathembi 'yokuqinisa idrama' ngokwenza kubonakale sengathi iqhawe layo eliqanjiwe likwazile ukwenza okungekho omunye wesifazane, kuhlanganise noGaprindashvili, owayekwenzile. ”
Icala libuye lithi uGaprindashvili uyathukwa ngeqiniso lokuthi Netflix umchaze njengomdlali waseRussia.
Abamele uGaprindashvili nabo bathi incazelo ye Georgian njengoba iRussia iyicala "lokufaka inhlamba eyengeziwe ekulimaleni" futhi yenza izimangalo eziningi ngobudlelwano phakathi kwala mazwe womabili.
Okhulumela iNetflix uthe: "INetflix ihlonipha kakhulu uNkk Gaprindashvili nomsebenzi wakhe oncomekayo, kodwa sikholwa ukuthi lesi simangalo asifanele futhi sizolivikela kakhulu leli cala."
I-Facebook: Yini igama?